Sebenzisa iphaneli le-KDE njengedokhu yakho ephelele | Kusuka kuLinux
Sebenzisa ipaneli ye-KDE njengedokhu yakho ephelele
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, I-GNU / Linux
Esikhathini esithile esedlule ngibonise izithombe-skrini zedeskithophu yami, engizisebenzisile ICairo-Dock njengedokhi lokuqalisa uhlelo lokusebenza.
Noma kunjalo ... awudingi idokhi njengalokhu ukuqalisa izinhlelo zokusebenza, lawula isidlali somculo wethu, nokuningi 😀
Bheka isithombe-skrini esilandelayo, bheka ngqo iphaneli yami ephezulu (noma udokodo, noma kunjalo ufuna ukulibona haha):
Njengoba ukwazi ukubona, ngenye iphaneli engiyengezile nangama-applet afanele, nginesqalisi sohlelo lokusebenza, ngilawula isidlali sami somculo (Clementine), Nginesimo sokusetshenziswa kwe-CPU yami, i-RAM ne-Network, kanye nenkinobho yokuvala / yokuqalisa kabusha esheshayo 😀
Ukufeza lokhu kulula kakhulu, kufanele siqale ngokungeza iphaneli entsha engenalutho, ngoba lokhu sichofoza kwesokudla kudeskithophu, Faka iPhaneli, Iphaneli engenalutho :
Lapho iphaneli selakhiwe, kuzokwanela ukuqala ukungeza izinto esizidingayo 🙂
Isibonelo, ukubeka ipaneli njengoba nginayo, kufanele bangeze okulandelayo:
Vimba / Qeda.
Kufanele futhi bangeze izikhala (izikhala) uma befuna into ngayinye yephaneli ihlukaniswe, kepha lokhu sekuvele kungukuthanda kwabo 🙂
Le phaneli lenzelwe ukuthi lifihlwe ngokuzenzakalela, ngokwenza lokhu ngeke lihlale libonakala, kepha lizocushwa noma lenziwe libonakale lapho ubeka isikhombisi / isikhombisi segundane phezulu, usinamathisela emaphethelweni aphezulu esikrini:
Noma kunjalo, ilula ... iyasebenza ... iphelele 🙂
Nicabangani? ... Yini oyisebenzisayo y? Ungayishintshela le paneli uma usebenzisa i-KDE?
Hhayi-ke, kwezinye izindawo okufanayo kungafinyelelwa, okungukuthi, lo «mbono / umqondo» wokusebenzisa iphaneli njengedokodo awuhlukile KDEuma usebenzisa I-Gnome, Xfce nabanye basengakwenza 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Sebenzisa ipaneli ye-KDE njengedokhu yakho ephelele
Amazwana ayi-73, shiya okwakho
Uke wazama i-wbar? Ilula, i-ultra minimalist futhi isebenzisa cishe zonke izinsiza.
Yebo ngiyizamile, njenge-AWN, Cairo-Dock, Docky, KDock, nabanye haha ​​😀
Ku-Wbar, ngingakwazi ukubeka ama-CPU, i-RAM kanye nalokho? Ngayisebenzisa eminyakeni eminingana edlule, kepha angikhumbuli ukuthi ibingasebenza 0_oU
Ku-XFCE ngokuzenzakalela kunephaneli elinezicelo ezizokwethulwa, ngilinika okusobala, ngikwenza lifihle ngokuzenzakalela, ngilisusa ngakwesokunxele kwesikrini (ngangiyisiko elivela e-Unity: P) futhi ngafaka iziqalisi nama-applet Sengivele nginendawo yami. Futhi ayinayo imiphumela emihle yokubuka, kepha ngalowo mqondo ngithanda ukubonakala okucashile (okulethayo) kanye ne-minimalism emsulwa.
Lokho kufanele ube okwangempela okuncane
Ukuthi isihogo sinjani lapha ¬_¬ ...
Ake sibone, chaza ukuthi kungani ngokusho kwakho, angiyena owangempela lapha gggrrr
Ngoba itheku yi-Mac O $ X
Kwazi bani ukuthi ngubani owasungula umqondo wokuthi 'indawo lapho 'izinqamuleli' zifakwa ezintweni esizisebenzisa kakhulu futhi ezidinga ukufinyelela kuzo ngendlela elula»¬_¬… kunomkhawulo wokuba yisiyaluyalu ... ungafaki i-troll…
indawo lapho 'izinqamuleli' zifakwa ezintweni esizisebenzisa kakhulu futhi ezidinga ukufinyelela kuzo ngendlela elula
Kukhona into ebizwa ngokuthi amashothikhathi, futhi i-KDE kudeskithophu inewindi elihlala njalo eliyi-folda, futhi uma ngikhumbula kahle linezinhlelo zokusebenza.
Angifuni ukuthi nginciphise izinhlelo zami zokusebenza ukuze ngibone 'okuthile' okungivumela ukuthi ngivule izinhlelo ezintsha ngisebenzisa 'izinqamuleli'. Kunzima kakhulu, ngifuna ukuvula izinhlelo ezintsha, bona izinzwa zokusetshenziswa, njll., Konke ngaphandle kokunciphisa izinhlelo zami ezivulekile, nangaphandle kokuchofoza okungaphezulu kokungu-2. Ingabe ikhona enye indlela oyaziyo? ...
Yebo, ungakushutha, ngokwesibonelo, okungeyona into enkulu kangako, noma uvule imenyu ye-K, engakuphoqi ukuba unciphise noma yini
Ukuvula imenyu ye-K akuvumeli ukuthi ngikwazi ukufinyelela ngokushesha kuma-sensors, futhi kuzomela ukuchofoza okungu-2 ukuvula uhlelo lokusebenza, kanti ngephaneli ephezulu kungu-1 kuphela.
Yebo, ake sibheke ukuthi uzozuza yini nge-herniated ¬¬ Thumela amaqanda
Imayelana nokuzizwa ukhululekile, unethezeke ngangokunokwenzeka. Ukube bengisebenzisa iWindows bengingenakukukhetha ngaphandle kokungisikiliza, kodwa akunjalo, njengoba ngisebenzisa i-Linux engikwaziyo futhi nginelungelo lami eliphelele lokushintsha engikufunayo, ukuze ngizizwe ngingcono ngohlelo lwami (ukuhlonipha amalayisense nalokho Sula).
Lapho i-Apple iveza amalungelo obunikazi emadokhumeni, ithi basungula lo mqondo, ukuthi akekho omunye umuntu ongasebenzisa noma yini efana nedokodo ... sizobona ukuthi ngenzani lapho
Futhi yebo, u-troll omkhulu kunanini ngaphambili kulezi zinsuku, ngicabanga ukuthi ukusebenzisa i-OS ewindini kukuthinte kakhulu i-LOL !!
Yebo, kepha okukodwa okukodwa akuthinti induduzo, uma sengivele ngikutshelile, ukwesaba i-herniation, futhi-ke ngikukhokhisa ukunakekelwa okubiza kakhulu
Ukuthi ngokombono WAKHO, ngendlela engibona ngayo akunjalo, ukuchofoza okukodwa kuyangicasula 😐
Ngabe ngilungiselela amasistimu okumnika okwamanje? Ngokuba nguwe ngikuvumele ukhethe.
IPalomilla noma i-Abbocath?
Yini malume inja enkulu kune-tin tin tin
Ngizokwenza sengathi angikufundanga lokho, ngoba esikhathini esingaphansi kwe-1m² ngingasho izinto ezimbalwa ezingeke zenze lutho oluhlekisayo >:
Isibindi, usebenzisa i-console kuphela? Ngoba kubonakala kimi ukuthi windows "akuzona ezomdabu" ku-GNU / Linux
Into eyodwa ugqozi futhi enye into ukukopisha
Kuyafana, uma ngabe wena uyidokodo, ngoba itheku yi-Mac OS uqobo, iwindi, ngoba iwindi lifana nohlelo lokusebenza oluzolisebenzisa kuqala. Futhi lesi yisibonelo esisodwa nje, ngoba kukhona izinkulungwane ngaphezulu.
Idokhu iyinto ewusizo futhi okungenani yenza kube lula kimi ukwethula izinhlelo zokusebenza engizisebenzisa kakhulu uma nginesandla sami kwigundane (uma ngina-2 kukhibhodi, kuyacaca ukuthi ngisebenzisa i-krunner). Yini enginayo yokukhahlela? Yebo, ngiyazi, kepha ngethekhi kungisindisa ngokuchofoza nokuthi yini okubaluleke kakhulu, kufanele ngibheke uhlelo ohlwini.
Yini okungajwayelekile? Njengakho konke okusizungezile, ukube bekungeke kube khona imodeli yefoni eyodwa (iqiniso lokwakha idivaysi evumela ukuxhumana njengoba benza selivele liyikhophi). Woza, uma ubungaguquguquki, ngisho nokuya emgedeni bekuzokusiza ngoba okhokho bethu "bebevele bekuqambile".
Woza, ukube ubungaguquguquki, ngisho nokuya emgedeni bekuzokusiza ngoba okhokho bethu “sebevele bakusungula”.
ngetheku ngigcina ngokuchofoza nokuthi yini okubaluleke kakhulu, kufanele ngibheke uhlelo ohlwini
NGEMPELA !!! Yilokho engikushoyo ngokunethezeka, kalula, ukonga isikhathi, ukuchofoza ...
Njengoba ngibona ukuthi awutholi lutho, ngithathe inkululeko yokucinga i-Google ngidesktops yasekuqaleni ye-KDE nenye evela ku-KZKG ^ Gaara, okuthi noma ngabe iyiGnome ingifanele nami:
Thungiwe futhi azikopishi lutho, futhi zibukeka zizinhle
Manje lena mayelana ne-KZKG ^ Gaara:
Sizithola sinedeskithophu egcwele izinto eziningi: I-Dock (Mac), i-Conky, imicimbi, okumele siyenze, abaqaphi njll. Akunakusho ukuthi isizinda singcolile impela, noma njengoba ngisho, i-reggaeton enonya.
Akukho okuvela kulokho kwedokodo ngaphandle kokugcwala ngokweqile.
Ngicabanga ukuthi iningi lizothanda ezimbili zokuqala.
Abakopishi lutho? Basebenzisa i-conky ukukhombisa imininingwane yohlelo. Ngaleso simiso sesi-3, okufanele ucabange njengokungekhona okweqiniso akusikho ukusetshenziswa kwedokodo, kepha ukuhlobisa kwalo noma imininingwane ekuhlinzekayo. Ukuthi idokodo ledeskithophu le-KZKG ^ Gaara libukeka njengechweba le-Mac OS? Yebo, kepha hhayi leli elikulesi sihloko futhi uligxeke ngendlela efanayo (ngaphezulu, kubonakala kimi ukuthi iMac OS ayikuvumeli ukubeka ukusetshenziswa kwe-CPU noma okunye okunjalo.
PS: Ngiyavuma ukuthi i-KZKG ^ Ideskithophu kaGaara ilayishwe ngokweqile, okungenani engikuthandayo, kepha hhayi ngenxa yetheku. Sola ku-conky okwenza isikrini sibonakale sinciphise (hhayi ukuthi sinjalo). Ngaphandle kwalolo lwazi olungaka endaweni encane kangaka "luyangimangaza."
PD2: Omunye umbuzo, Isibindi, wehlukanisa kanjani phakathi kwedokhu nephaneli eligcwele izithonjana zohlelo lokusebenza?
Engxenyeni yedeskithophu yami ... hehe yebo, ngiyavuma ukuthi belilayishwe kancane, manje sengibona ideskithophu yami namuhla futhi ngiyithola ingcolile, ihlanzekile kakhulu 😀
Isikrini sami sincane… ukulungiswa okuphezulu okungu-1024 × 768, isibonisi se-laptop yami singaphansi kwamasentimitha ayi-15 (13 noma 14, angisakhumbuli) but… kepha kuseseyilaptop enhle kakhulu hahahaha.
Manje, ngeke uphike ukuthi uhla lwemibala lwento yonke ebelizolingana? 🙂
Angikuphiki lokho, akukho xD
Ngabe uhlukanisa kanjani phakathi kwedokhu nephaneli eligcwele izithonjana zohlelo lokusebenza?
Kuma-aesthetics, iqiniso ukuthi angithandi ukubeka izithonjana, kakhulu uConky futhi yilokho kuphela
Abakopishi lutho? Basebenzisa i-conky ukukhombisa imininingwane yohlelo.
Impela, ngoba omunye umfana ubeka uConky phambi kwabo, akunjalo? Woza ...
Kuyafana nasethekwini, angiyena owangempela yini ngoba njengoba ushilo iMacOS uyibeke phambi kwami ​​akunjalo?
Akukona ukuthi bakubeka ngaphambi, kungukuthi bakusungula
Akwamukelekile ukuthi uGaara akayidlulisi leyo Wallpaper.
LOL !!!! woza, nakhu ngibashiya: https://blog.desdelinux.net/wp-content/uploads/2012/02/Elisha-Cuthbert-kzkggaara-wallpaper.jpg
PS: Isibindi, ungagcina ukuthukwa, ukugxekwa, noma yini haha
Isibindi, ungazisindisa ekuthukweni, ekugxekweni, noma kunoma yini
Njengoba ufuna i-reggaeton enonya
Ngaphezulu, okukodwa futhi usuvele unamazwana ayi-1000 😀
Isibindi singiphendula ngokuthile:
Kungani usebenzisa i-PC, uma lokho kudalwe "ngomunye umuntu"? Kungani ugqoka izingubo uma omunye umuntu ekwenzile lokho? Kungani ulalela umculo ofanayo olalelwa abanye abantu? Kungani usebenzisa i-Archlinux noma iWindows uma abantu abaningi besenza? Noma kunjalo ... Ngingaba nemibuzo eminingi engizokubuza yona, kepha yonke ingiholela empendulweni efanayo: AWUKHO OKUQALA, noma.
Kungani usebenzisa i-PC, uma lokho kudalwe "ngomunye umuntu"?
Kungani ugqoka izingubo uma omunye umuntu ekwenzile lokho?
Kungani ulalela umculo ofanayo olalelwa abanye abantu?
IChorra nama solos ami awafani nawabanye
Kungani usebenzisa i-Archlinux noma iWindows uma abantu abaningi besenza?
Ake sibheke ukuthi ngikuchaza kanjani konke ... angisho ukuthi uSandy kufanele asungule enye ideskithophu noma yini efana naleyo, ngithi nje akudingeki ubeke izingxenye kuyo okuyikhophi lolunye uhlelo.
Impendulo yobuntwana .. Awuzange uqonde nje ukuthi sonke asinakho ukuhlukumezeka onakho nge-OS X, Ubuntu kanye neShuttleworth? Kwenza mehluko muni uma thina bantu abafayo njengoDock, izinkinobho ezingakwesobunxele, ingqikithi ye-Ubuntu noma njengoba usho, Reggaeton? Uma kukhona okunye ongakuthandi, ngakho-ke ungakusebenzisi, ungakulaleli futhi kuphelele lapho.Ungadluli empilweni ufuna abanye bazijwayeze ukuthanda kwakho nezinto ozithandayo.
Kepha ngubani isihogo esikutshele ukuthi ngicabanga iMac, iWindows noma enye i-OS ngokubeka iphaneli ngezithonjana nokunye ukunethezeka ???
Isibindi, ungasebenzisi windows, ziyingxenye yenye i-OS !!! 😛
Futhi yeka ukubizwa ngokuthi «Isibindi», nokungesiyo eyangempela 😀
Fuck into esontekile onayo.
Anginalutho olumelene nokusebenzisa idokhu, futhi akulona ukuhlukumezeka nganoma iyiphi i-OS noma yini, ngisaqhubeka nokukhubazeka uma othile enza ikhophi ye-Arch ayinike elinye igama.
Kufanele ube owangempela kancane, futhi ukuba ngowangempela akusho ukuthi kufanele udale okuthile okungekho
njengoba usho, reggaeton
Icala elikhethekile ngoba akuwona umculo, yi-shit
Ngisazobambana uma umuntu enza ikhophi ye-Arch bese ebeka elinye igama kuyo.
Ngicabanga ukuthi ibizwa nge-ArchBang, Chakra .. njll.
Kepha lokho ngokombono wethu, mhlawumbe komunye umuntu umculo ohamba phambili emhlabeni futhi kufanele sikuhloniphe lokho. Engikushoyo troll othandekayo, ukuthi ngezikhathi ezithile kufanele ngaphambi kokuveza ukukhungatheka kwakho lapho uphawula, ucabange ukuthi kunabantu abangakucasula lokho. Kulungile, ngiyazi ukuthi lowo umbono wakho, kepha ngiphakamisa ukuthi uma uwusho, esikhundleni sokuthi: "IMac is shit", kufanele uthi: "Kimi (umbandela, umbono), iMac is shit"
Esikhundleni sokuthi: "IMac iyabamba", kufanele uthi: "Kimi (umbandela, umbono), iMac iyabamba" ..
Ngaphandle kokungabaza, iseluleko esihle kakhulu.
Noma ngabe amahlaya, sina ... khumbula ukuthi labo abakufundayo uma bezizwa bekhubekile, ngeke bacabange «Isibindi de <° Linux sinzima"... uma kungenjalo"ku <° Linux ziyasinda»😉
Uma sikunikeza izeluleko kungenxa yokuthi siyakwazisa, unganqikazi 😀
Ngokuphelele ngokusho kwe-ArchBang, akufanele kube yi-distro ehlukile, yi-Arch + Openbox nje.
I-Chakra kungenye indaba ngoba bafuna ukuba yiphrojekthi ezimele futhi izinto eziningi ziyashintshwa
Futhi ubani othi ngithe ucabange uMac ukubeka iphaneli?
Futhi yeka ukubizwa nge- "Courage", okungesiyo eyangempela futhi 😀
Ngiyazi, kepha angizukubeka igama lami langempela kuyo yonke indawo.
Labo abangenandaba ukuthi bayazi yini, angithi?
Uma sikunikeza izeluleko kungenxa yokuthi siyakwazisa, unganqikazi
Kepha angikwenzi, kunzima kakhulu kimi ukwazisa umuntu, yingakho nginabantu ababili kuphela (gwema utshani bengqondo ngoba omunye walabo bantu nguyena ozocabanga ngaye)
Empilweni uma unakekela ukujabulisa wonke umuntu ungagcina ufile, uma othile ephatheke kabi ngamazwana afana ne- * mac sucks, ake ngikutshele ukuthi ayikhululekile kodwa ikhululeke kakhulu, ngaphandle kokuthi iyisisebenzi se-aphula akufanele ukhathazeke kwalokho, kwenzeka okufanayo nakweminye imicrosoft noma ubuntu.
Kulungile. Ngisebenzisa iCairo-dock ku-Openbox, yize ngiyidinga kancane kancane futhi ingudaba lobuhle.
Isibindi asikho icala, uthambekele kakhulu kamuva nje xD
Ngamunye ungowokuqala ngendlela yakhe futhi ngiyalithanda ideski lakho. Ukwanga.
Ngiyabonga ngalelo hora lokugcina, kuyamangaza ukuthi umuntu uthanda ideskithophu yami ... okokugcina lapho ngifaka isithombe-skrini kuye befuna ukungibulala LOL !!!
Leli tafula lingcono kakhulu. Ngiyayithanda nami.
Ngakho-ke uGaara, ngaleso sikhathi besingafuni ukukubulala, okwenzekile ukuthi amehlo ethu abengakwazi ukuthwala eziningi kangaka zichuma ndawonye…
HAHAHA !!!!! yebo yebo ngithe, bafuna ukungibulala LOL !!!
Noma kunjalo, manje kunedatha engikhumbula ukuyibuka shazi, ngokwesibonelo amazinga okushisa we-CPU ne-HDD, inani eliphelele lama-GB wokulayisha / ukulanda ngenethiwekhi, njll.
Gaara, awukhumbuli yini intombazane emnyama ngemuva kwalawo mafu? Ubuye wafundisa imininingwane ebalulekile ...
Kubukeka kanjani kuhle? … LOL !!
Ngabe ukubonile okuthunyelwe engikwenzile isikhashana ku-Artescritorio?
Hahaha ... esikhathini esithile esedlule ngibone okuthunyelwe kwakho kusuka kumlingisi omuhle kakhulu ukuthi angilikhumbuli igama lakhe, kepha into blonde ikunikeze isibindi ngesixhumanisi esingenhla.
Noma kunjalo, idatha enhle, yaleyo misebenzi kuzodingeka uhambe kaningi nge-artescritorio ... 😉
Lowo ohlanganiswe idokodo elilula ... xDD
Iphutha lika-Isar, uSandy no-Elva
Futhi ngenxa yefilosofi yakho yokuphikisana nekhophi ... efana ncamashi nokulungiswa ku-copyright, akunjalo i-xD
Le ekugcineni ene-copyright yayo ecishe isebenze futhi usebenzisa iWindows, uzobona ukuthi kugcina kuyinhloli ye-Microsoft HAHA
Inhloli yimi uLOL.
"I" ... O_O ... ayifanele ukuba "I" ... WTF !!!
Thola ukwenza imali ... okuthile okuwusizo okumele ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani ukukhiqiza imali? 😀
Enye i-WTF ezungeze lapha. Ngangikholwa naso sonke lesi sikhathi ukuthi i-pandev "yiyo".
Ukuthi, iphutha lethu, awukaze uphendule cha? Yebo, bheka ukuphawula kokuqala ngesihloko, kubonakala sengathi bekungeyakho
Kepha lokho akusho ukuthi kuzofanela ujije lokho obekubandakanyekile. Ukusuka lapho, uSandy waqala ukudlala isimungulu lapho azi kahle ukuthi ngangikhuluma ngani bese abanye besayina.
Kuhle kakhulu, bengingayisebenzisa kepha i-icewm inedokodo elisele, nginezicelo zami ezixhunyaniswe nenhlanganisela yekhibhodi. Kulula.
Kukhona nemisebenzi ebabazekayo yize ingaphelele kangako futhi ingazinzile, iqiniso ukuthi ngisebenzisa isiqalisi esisodwa, iphaneli elengeziwe lenze i-plasma idle okuningi kakhulu.
ahh ngikhohliwe, nakhu kukhona neqoqo elinokulungiswa okuhlukile kwephaneli le-kde http://kde-apps.org/content/show.php/Plasma+Panels+Collection+?content=147589 gnome2 gnome3 kde3 njll
wow interesting, bengingamazi ... ngizomqapha 😀
Nami ngikwenzile lokho, kucishe kwaphuma kwaphuma, ngisebenzisa uLubuntu.
Yebo, ngingathanda ipaneli ye-kde, kepha noma ngabe ngizame kanzima kangakanani, yehluleka, amafasitela adlula ngaphansi kwephaneli, noma uma ngiyilungiselela ukuthi ifihle ngokuzenzekelayo ngemuva kwemizuzu embalwa yenza lokho ekufunayo futhi ihlala ibonakala njalo futhi iyacasula . Inqobo nje uma bengayilungisi leyo bug, ngicabanga ukuthi kuzofanele ngithole idokhu. Uma umuntu enesixazululo ngingasithokozela, sengivele ngazama ukususa ifolda .kde4, ngiyifakile kusukela ekuqaleni futhi ihlala yenza okufanayo, zombili ku-opensuse 12.3 no-13.1 okuyiyona engiyisebenzisayo. Halala!
URoberto Rubio Romero kusho
Kubukeka kukuhle kimi kulabo bethu abangafuni ukwenziwa ngokwezifiso ezinqala kakhulu, okuncane kakhulu njengomuntu oshiwo ngaphambili futhi empeleni akudli cishe noma yiziphi izinsizakusebenza ngoba kuyinto eyodwa yohlelo. Njengamanje ngisebenzisa i-FEDORA 24 futhi ngikuthola kuwusizo ngale ndlela, ngithembekile, angikaze ngithande imigoqo emibili kuqapha lami futhi ngiyazikhohlisa ngicabanga ukuthi yiDOKI. Iwusizo kakhulu kimi.
Siyabonga ngokwabelana ngombono.
Phendula uRoberto Rubio Romero
Ubuntu ne-Android bahlangana
Susa ama-Desktops ekubukeni konke ku-Gnome Shell